China Convex White Yellow Thermoplastic Road yokuMakisha Ipeyinti umzi-mveliso kunye nabavelisi |River Lake
1. Ukunyanzeliswa ukunxila-ukuxhathisa Ipeyinti yethu ine-compression efanelekileyo yokunxiba-resisting, ukuqinisekisa ukusetyenziswa ixesha elide.
2. Isiphumo sokubonisa Ngokwesantya sokumisa amaso eglasi, khetha ngokufanelekileyo i-refractive ezinzileyo kunye nomgangatho ophezulu wokugquma amaso eglasi anomlinganiselo owahlukileyo wamasuntswana, ukuqinisekisa ukuba ukumakishwa kuhlala kukwimbonakalo ephezulu xa kusenziwa.
3. Yomisa ngokukhawuleza Sebenzisa ifomyula eyahlukileyo ukuvelisa ipeyinti ngokuhambelana nobushushu, ukufuma kunye nemeko ye-roadbed xa uphumeza, qinisekisa ukuba isantya sokumisa ngokukhawuleza kunye nepropathi echasene ne-antifouling yokumakisha.
4. Uzinzo (Weatherability) Khetha ukukhanya okugqwesileyo kunye nozinzo lobushushu imathiriyeli ekrwada, ukuqinisekisa ukuba umbala osebenza ixesha elide kunye nokukhazimla naphantsi kwelanga elinamandla.
Ngaphambili: Ipeyinti yeNdlela yokuMakisha yeNdlela eNgqobileyo eMthubi eThermoplastic
Okulandelayo: Ipeyinti yendlela yokuMakisha yasePhilippine eyenzelwe iThermoplastic
I-Thermoplastic Acrylic Resin yeNdlela yokuMakisha iPaint eReflective
UkuKhanya kweThermoplastic kwipeyinti yokuMakisha yeNdlela emnyama
Ibala eliMthubi eliMhlophe kwiNdlela eshushu iNyibilika iNdawo ekrwada yePayinti yeThermoplastic yeNdlela yokuMakisha